Saadaalinta Suuqgeynta ee 2016 | Martech Zone
Sanadkiiba mar ayaan jabiyaa kubbadii hore ee madadaalada ahayd waxaanan la wadaagaa waxyar saadaalin suuq geyn ah oo ku saabsan isbeddelada aan isleeyahay waxay muhiim u noqon doonaan ganacsiyada yaryar. Sanadkii la soo dhaafay waxaan si sax ah u saadaaliyay kororka xayeysiinta bulshada, doorka la ballaariyay ee ka kooban aaladda SEO iyo xaqiiqda ah in nashqadeynta jawaabta moobiilku aysan noqon doonin mid ikhtiyaari ah. Waad akhrisan kartaa dhammaan suuqgeynteyda 2015 Saadaalinta oo arag sida aan ugu dhawaa. Kadib akhri si aad u aragto isbeddellada ugu sarreeya ee lagu daawanayo sanadka 2016.
Mawduuc, Warbaahinta Bulshada iyo Saadaalinta Suuqgeynta SEO
Toos u tabinta bulshada: Barnaamijyada sida Periscope, Meerkat iyo Facebook Live cusub way ka sahlan tahay sidii hore in lala wadaago "waxa hadda dhacaya". Looma baahna qalab fiidiyoow qaali ah ama codsiyo toos ah oo toos u socda. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa taleefan casri ah iyo internetka ama qadka isku xirka wax walbana waad baahin kartaa, waqti kasta. Awoodda si toos ah looga baahin karo dhacdo, wareysi lala yeelanayo macmiil faraxsan ama muujinta wax soo saarka dhaqsaha badan ayaa ku jirta jeebkaaga. Kaliya maahan in fiidiyowgu fududahay in la isticmaalo, laakiin tirakoobka ku lug lahaanshaha iyo wadaagista ayaa si aad ah uga sarreeya sawirrada fudud. Haddii aad rabto in laguu ogaado 2016 waxaad u baahan doontaa fiidiyow si taasi u dhacdo.
Iibso HADA, HADA, HADA!: Sanadkii la soo dhaafay milkiilayaasha meheradaha yaryar waxay dareemeen riixitaanka inay ku xayeysiiyaan baraha bulshada maaddaama ay arkeen hoos u dhaca aragtida dabiiciga. Si xayeysiinta looga dhigo mid rafcaan leh, ku darista qaababka cusub ee "hadda iibso" ee Facebook iyo Pinterest waxay beddeli doontaa xayeysiiska bulshada ee ka socda dhismaha wacyigelinta iyo iibinta soo saarista. Markay tani sii socoto waxaan filayaa in barmaamijyo badan oo bulsheed ay raaci doonaan.
Helitaanka macluumaadkaaga la akhriyo: Sanadkii la soo dhaafey waxaan ku sagootinay iskuxirka iskudhafka ikhtiyaariga ah iyo istaraatiijiyadaha walxaha muhiimka ah. Warka wanaagsani - Tani waxay sababtay u-beddelashada nuxurka oo ah udub-dhexaadka istiraatiijiyad wax ku ool ah SEO Warka xun: Qarxa waxyaabaha ku jira bogagga internetka iyo baraha bulshada ayaa ka dhigay wax ka adag sidii hore in la ogaado. Sannadka 2016 shirkadaha guuleysta waxay diiradda saari doonaan taxaddar dheeri ah istiraatiijiyaddooda qaybinta, iyagoo ka helaya waxyaabaha ay hor dhigayaan dadka saxda ah iyadoo loo marayo isgaarsiinta emaylka lala beegsanayo iyo kooxaha bulshada ee u heellan. .
Saadaalinta Suuqgeynta Naqshadeynta Webka
Macsalaameyn dhinacyada: Mar uun muuqaalka caadiga ah ee degel kasta, si dhakhso leh ayey u sii yaraanayaan sababtoo ah si fiican ugama shaqeeyaan goobaha moobiillada. Macluumaadka halista ah ee ku yaal dhinaca dhinaceeda wuxuu ku dhacaa dhinaca hoose ee bogga aaladaha mobilada iyagoo ka dhigaya kuwo aan waxtar lahayn guri ahaan nooc kasta oo wicitaan ficil ah.
Naqshadeynta moodada ah: Ka fikir sariir qaabaysan Waxaad diyaarin kartaa qaybaha si ay u sameeyaan sariir ama kursi jacayl iyo kursi gooni ah. Iyada oo leh qalab badan oo naqshadeyn ah (oo ay ku jiraan Divvy by Elegant Themes), horumariyeyaasha websaydhku waxay dhisi karaan bogag kuwaas oo runtii ah taxane ka kooban qaybo kala duwan oo loo habeeyey si ay ula kulmaan ujeeddo gaar ah. Nidaamkan qaabaysan wuxuu ka xoreynayaa naqshadeeyayaasha shabakadaha xaddidaadaha mawduuc gaar ah. Bog kasta wuu ka duwanaan karaa gabi ahaanba. Filo inaad aragto adeegsiga hal-abuurnimo ee qaababkan sanadka 2016.
Maaha naqshad fidsan: Sanadihii ugu dambeeyay, minimalism ayaa xukumayay. Naqshado fudud, oo aan lahayn hooska ama walxo kale oo sawirro siiya qoto dheer iyo cabbir ayaa ugu sarreeyay maxaa yeelay waxay si dhakhso leh ugu rakibeen nooc kasta oo qalab ah. Si kastaba ha noqotee tiknoolijiyada ayaa soo hagaageysa oo Apple iyo Androids labaduba hadda waxay taageeraan naqshad la beddelay, semi flat flat. Maaddaama qaabkani uu ku soo qulqulayo moobiilka wuxuu u shaqeyn doonaa inay dib ugu noqoto naqshadeynta websaydhka sidoo kale. Ma filayo in aan arki doonno dib u laabashada hooska hoos u dhaca ama muuqaalka qoyan ee caanka ah toban sano ka hor, laakiin waxaan sugi karnaa naqshadaha waxoogaa ka taajirsan ee 2016.
Qalabyada wada hadlaya: Waxaan u maleynayay in dhaqaajinta suuq geynta isdhexgalka ay qaban doonto si ka dhaqso badan sidii ay aheyd sidaa darteed waxaan u dhaqaajin doonaa saadaashan ku saabsan IoT (Internetka Waxyaabaha) laga bilaabo 2015 ilaa 2016. IoT waa codsiyo u oggolaanaya wada xiriirka aaladaha iyo / ama inta u dhexeysa aaladaha iyo aadanaha. Tusaale ahaan, elektaroonigga casriga ah ee lagu dhisay gaarigaaga ayaa kuu sheegaya marka cadaadiskaaga taayirku hooseeyo ama ay tahay waqtigii la beddeli lahaa saliiddaada. Fitbit-kaygu si otomaatig ah ayuu ula shaqeeyaa taleefankayga casriga ah kaas oo markaa ii oggolaanaya inaan ogaado marka aan ku dhowaado himilooyinkayga maalinlaha ah. Haddii aaladaha casriga ahi ay digniino u diraan aaladaha kale waa macquul oo kaliya waxay bilaabi doonaan inay fariimo u diraan ganacsatada iyo adeeg bixiyaasha. Foornadaadu waxay u sheegi kartaa farsamayaqaanadaada HVAC markay u baahan tahay in loo adeego, ama qaboojiyahaaga ayaa laga yaabaa inuu dib u habeeyo caano marka khaanaddu faaruq tahay. Sanadka 2016 waxaa jiri doona codsiyo badan oo macaamiishaada u oggolaanaya inay iska diiwaan geliyaan xusuusinta iyo digniinta dhammaan noocyada wax soo saarka iyo adeegyada
Waxaan had iyo jeer xiiseyneynaa isbeddellada, gaar ahaan milkiilayaasha ganacsiyada yaryar (shirkadaha ay ka shaqeeyaan in ka yar 100 shaqaale ah). Hadday taasi adiga kula mid tahay, ma qaadan doontaa daqiiqado yar inaad ku dhammaystirto sahankeenna sannadlaha ah?
Tags: marketingqalabka suuq-geynta
Sida loo Isticmaalo Xayeysiiska StumbleUpon iyo StumbleUpon